Search ျသကား - BajarFB.com
Search Results - ျသကား
ဟာ သကား ေလး ေပါ့ ျကည္ ျကည္သူငယ္္ခ်င္း တို
ဟာ သကား ေလး ေပါ့ ျကည္ ျကည္သူငယ္္ခ်င္း တို Kaung Chit Thu 26 Jul 2016 · 7K views
ခန္​႔စည္​သူကား​ေလး Chit Sone Lay 1 Dec 2018 · 420 views
တင္​​ေပးလိုက္​ပီ​ေနာ္​ 😊😊 ျမင္​့ျမတ္​ နဲ႔ ​ေက်ာ္​သူ.ကား😊
တင္​​ေပးလိုက္​ပီ​ေနာ္​ 😊😊 ျမင္​့ျမတ္​ နဲ႔ ​ေက်ာ္​သူ.ကား😊 Mg Lynn Htet9May 2020 · 1K views
大家晚安. သက်ား ဝမ္အန္း အားလုံး မဂၤလာရွိေသာညခ်မ္းေလးျဖစ္ပါေစ ၾသရသ ရဲ႕ မုန္းဖို႔လြယ္သည္ ေမ့ဖို႔ခက္သည္ သီခ်င္းေလး နဲ႔ သံစဥ္တူ တ႐ုပ္သီခ်င္း
大家晚安. သက်ား ဝမ္အန္း အားလုံး မဂၤလာရွိေသာညခ်မ္းေလးျဖစ္ပါေစ ၾသရသ ရဲ႕ မုန္းဖို႔လြယ္သည္ ေမ့ဖို႔ခက္သည္ သီခ်င္းေလး နဲ႔ သံစဥ္တူ တ႐ုပ္သီခ်င္း ေန႔စဥ္သုံး. တ႐ုပ္စကားလံုး ေလးမ်ား5Sep 2014
Alpard (2015) သံကား Condition - Like New Size - ၂" လက်မ အနာ ပါမပါကြည့်ရအောင် Video လေးတင်ထားပေးပါတယ် Prices - 3,800mmk Kpay နဲ့ရှင်းလို့ရပါတယ် Dora Toys Shop2Oct · 303 views
အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး.....ကြည့်ရတာတခုခုပဲ မေးစိတပွတ်တပွတ်နဲ့ စဉ်းစားနေသည်.... ကျော်ကြီး ကားရေမဆေးရတာ ကြာပြီ စိတ်ထင် 1 လနီးပါးရှိပြီ ... သေချာအောင် အနီးကပ်သွားကြည့်လိုက်သည်။ကားကဖုန်တွေ အညစ်အကြေးတွေ အရင်လို ကပ်နေတာ မျိုးမရှိ။ပြောင်လက်ပြီး သန့်စင်နေသည်။ မနေ့က မိုးရွာထားလို့ အဝတ်နဲ့ ပြန်သုတ်ထားသော်လည်း ကားဆေးသားက ပထမဆေး ထားသလို ပြောင်လတ်နေသည်။ စိတ်ထင်ကားကလည်း အရင်ကထက်ပိုပြောင်လတ်ပြီး ‌ပျောက်လုနီးနီး ဖြစ်နေသော ပုလဲဖောက်လေးတွေပါ ပြန်မြင်ရနေပြီ။တခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲ သူ့ကား ကိုဘာတွေလုပ်ထားလည်း သိရအောင် ညီဖြစ်သူဇော်ကြီးကိုမေးသည်။ "အငယ်ကောင် မင်းငါ့ကားကို ဘာလုပ်ထားတာလဲ စက်ပေါ်လစ် သွားတိုက်ထားတာလား" ‌အိမ်ထဲက ညီဖြစ်သူ ဇော်ကြီး ကို လှမ်းမေးသည်။ညီဖြစ်သူ ဇော်ကြီး ထွက်လာပြီး "ဘာဖြစ်လို့လဲ ကျော်ကြီးရ မင်းက ကားညစ်ပတ်တော့လည်း ပွစိပွစိ အခု သန့်ရှင်းတောက်ပြောင်နေတော့လည်း ပွစိပွစိ မင်းမလွယ်ပါဘူးကွာ"။ "ကားခဏ ခဏ ညစ်ပတ်ပြီး အရောင်တွေကျလို့ Voulis Superfast ဆပ်ပြာနဲ့ Smart wax နဲ့ တိုက်ထားတာကွ" ဟု‌ဇော်ကြီးက ပြန်‌ဖြေသည်။ ကျော်ကြီးက "မင်းဟာက စိတ်ချရလို့လား ငါ့ကားဆေးသား တခုခု ဖြစ်နေပါဦးမယ် နောက်ပြီး ဘယ်လောက်တောင်ပေးရလဲ" "ကျော်ကြီးရေ စိတ်မချစရာ တော့မလိုဘူး Made by E.U (ဥရောပ ထုတ်ကုန်) ဟ ဈေးကလည်း ဆပ်ပြာ တလီတာ မှ 6000 နဲ့ Smart Wax တစ်ဗူးမှ 15000 ပဲရှိတယ် တစ်ဗူးဆီ ဝယ်ထားရင် မင်းတစ်နှစ်6လ လောက် အေးဆေးသုံး ရုံပဲ" ကျော်ကြီးမှာ တအံ့တဩဖြင့် "ဟေ...ဟုတ်လား ဒါဆို အတော်တန်တာပေါ့ကွ ဟန်ကျသဟေ့ မင်းဘယ်ကသွားဝယ်တာလဲ" ဇော်ကြီးလည်း စိတ်မရှည်ဟန်ဖြင့် " လိပ်စာက အမှတ် 99/7 ဦးစလမ်း လှိုင် မြို့နယ် ph နံပါတ်က 09260010060 ကိုဆက်လိုက် သူတို့လာပို့ပေးတယ်။Deli ခကလည်း သက်သာတယ်ဟ နောက်ပြီး မင်းသူငယ်ချင်းဆိုင်ကိုလည်း ပြောလိုက် ဆပ်ပြာက 20 လီတာ ဗူးကြီးတွေလည်း ရှိတယ်လို့ " ကျော်ကြီး လည်း မျက်နှာငယ်လေးဖြင့် နားထောင်နေပြီး "အေး" တခွန်းတည်းသာပြောရင်း ကားလေးကို လှည့်ပတ် ကြည့်ရှုနေရင်း သဘော အကျကြီး ကျနေလေတော့သည်။ ကျော်ကြီးရဲ့ကားလို အမြဲသန့်စင်တောက်ပြောင်နေအောင် မှာယူလိုပါက ယခု post အောက်တွင် အမည် နေရပ်လိပ်စာ ph တို့ပေး၍ အမြန်မှာယူ နိူင်ပါပြီ။
အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး.....ကြည့်ရတာတခုခုပဲ မေးစိတပွတ်တပွတ်နဲ့ စဉ်းစားနေသည်.... ကျော်ကြီး ကားရေမဆေးရတာ ကြာပြီ စိတ်ထင် 1 လနီးပါးရှိပြီ ... သေချာအောင် အနီးကပ်သွားကြည့်လိုက်သည်။ကားကဖုန်တွေ အညစ်အကြေးတွေ အရင်လို ကပ်နေတာ မျိုးမရှိ။ပြောင်လက်ပြီး သန့်စင်နေသည်။ မနေ့က မိုးရွာထားလို့ အဝတ်နဲ့ ပြန်သုတ်ထားသော်လည်း ကားဆေးသားက ပထမဆေး ထားသလို ပြောင်လတ်နေသည်။ စိတ်ထင်ကားကလည်း အရင်ကထက်ပိုပြောင်လတ်ပြီး ‌ပျောက်လုနီးနီး ဖြစ်နေသော ပုလဲဖောက်လေးတွေပါ ပြန်မြင်ရနေပြီ။တခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲ သူ့ကား ကိုဘာတွေလုပ်ထားလည်း သိရအောင် ညီဖြစ်သူဇော်ကြီးကိုမေးသည်။ "အငယ်ကောင် မင်းငါ့ကားကို ဘာလုပ်ထားတာလဲ စက်ပေါ်လစ် သွားတိုက်ထားတာလား" ‌အိမ်ထဲက ညီဖြစ်သူ ဇော်ကြီး ကို လှမ်းမေးသည်။ညီဖြစ်သူ ဇော်ကြီး ထွက်လာပြီး "ဘာဖြစ်လို့လဲ ကျော်ကြီးရ မင်းက ကားညစ်ပတ်တော့လည်း ပွစိပွစိ အခု သန့်ရှင်းတောက်ပြောင်နေတော့လည်း ပွစိပွစိ မင်းမလွယ်ပါဘူးကွာ"။ "ကားခဏ ခဏ ညစ်ပတ်ပြီး အရောင်တွေကျလို့ Voulis Superfast ဆပ်ပြာနဲ့ Smart wax နဲ့ တိုက်ထားတာကွ" ဟု‌ဇော်ကြီးက ပြန်‌ဖြေသည်။ ကျော်ကြီးက "မင်းဟာက စိတ်ချရလို့လား ငါ့ကားဆေးသား တခုခု ဖြစ်နေပါဦးမယ် နောက်ပြီး ဘယ်လောက်တောင်ပေးရလဲ" "ကျော်ကြီးရေ စိတ်မချစရာ တော့မလိုဘူး Made by E.U (ဥရောပ ထုတ်ကုန်) ဟ ဈေးကလည်း ဆပ်ပြာ တလီတာ မှ 6000 နဲ့ Smart Wax တစ်ဗူးမှ 15000 ပဲရှိတယ် တစ်ဗူးဆီ ဝယ်ထားရင် မင်းတစ်နှစ်6လ လောက် အေးဆေးသုံး ရုံပဲ" ကျော်ကြီးမှာ တအံ့တဩဖြင့် "ဟေ...ဟုတ်လား ဒါဆို အတော်တန်တာပေါ့ကွ ဟန်ကျသဟေ့ မင်းဘယ်ကသွားဝယ်တာလဲ" ဇော်ကြီးလည်း စိတ်မရှည်ဟန်ဖြင့် " လိပ်စာက အမှတ် 99/7 ဦးစလမ်း လှိုင် မြို့နယ် ph နံပါတ်က 09260010060 ကိုဆက်လိုက် သူတို့လာပို့ပေးတယ်။Deli ခကလည်း သက်သာတယ်ဟ နောက်ပြီး မင်းသူငယ်ချင်းဆိုင်ကိုလည်း ပြောလိုက် ဆပ်ပြာက 20 လီတာ ဗူးကြီးတွေလည်း ရှိတယ်လို့ " ကျော်ကြီး လည်း မျက်နှာငယ်လေးဖြင့် နားထောင်နေပြီး "အေး" တခွန်းတည်းသာပြောရင်း ကားလေးကို လှည့်ပတ် ကြည့်ရှုနေရင်း သဘော အကျကြီး ကျနေလေတော့သည်။ ကျော်ကြီးရဲ့ကားလို အမြဲသန့်စင်တောက်ပြောင်နေအောင် မှာယူလိုပါက ယခု post အောက်တွင် အမည် နေရပ်လိပ်စာ ph တို့ပေး၍ အမြန်မှာယူ နိူင်ပါပြီ။ Xing Qiu Car Care 28 Aug 2020 · 12K views